Dubartoonni Afrikaa Kibbaa HIV qaban dhala akka hin godhanne taasifamuun saaxilame - BBC News Afaan Oromoo
Dubartoonni Afrikaa Kibbaa HIV qaban dhala akka hin godhanne taasifamuun saaxilame
Dubartoonni Afrikaa Kibbaa dhiiga isaanii keessatti HIV'n argamu hayyama isaanii malee gadameessi isaanii akka guduunfame qorannoodhaan mirkanaa'e.
Hospitaalonni mootummaa kabaja dubartootaa sarbaniiru,''fedhii isaanii malee dararaafi haala namummaatiin gadi taheef saaxilamaniiru'' jedha Koomishiniin Wal-qixxummaa Koorniyaa qorannicha gaggeesse.
Koomishinichi qorannoo isaa waggaa shanitti kan xumure yoo tahu dubartoonni 48 dhimma kana keessa darbaniiru jedha. Rakkoon kun jiraachuu jalqaba kan akeeke gareewwan mirga namaaf quuqamaniifi miidiyaa Rooyitars jedhamu dha.
Hakiimonni hospitaalota tokko tokko keessatti argaman dubartoota oppireeshiniidhaan dahuu deeman, namni HIV qabu daa'ima godhachuu hin qabu, kan biraa godhachuu yoo fedhan daa'imni isaanii akka du'u itti himaniru.
'Dhukkubbii ciniinsuu sodaadheen oppireeshiniin dahe'
Ujummoo dubartoonni dhaabatanii akka fincaa'an gargaaru
Eebbifamtoonni Yuunivarsiitii Jimmaa meeshaa ciniinsuu hordofu kalaqan
Dubartoonni otoo ciniinsuu cimaarra jiranii unka gadameessi isaanii akka guduunfamu eeru akka mallatteessniifi yoo kana hin goone gargaarsa fayyaa akka hin argnne faa itti himameera.
Koomishinichi qorannnicha xumuruudhaaf rakkisaa ture sababiinsaa ragaan dhukkubsattootaa badee ture jedheera.
Hogganaan Koomishinichaa Taamaaraa Maateebulaa, ''rakkoon kun Afrikaa Kibbaa keessatti hangam babal'atee akka jiru hin beekamu, qorannoon keenyi garuu dhimmoota hanga yoonaa hin beekamneef hulaa sakatta'insaa ni bana, '' jedha.
Ministirri Fayyaa Weelinii Kiheezii wal-gahii hatattamaa waamuudhaan gabaasa kana irratti mri'achuuf akka jedhu Rooyitars ibseera,,
Fayyaa dubartootaa: 'Dhukkubbii ciniinsuu sodaadheen oppireeshiniin dahe'
1 Adooleessa 2019
Fayyaa dubartootaa: Ujummoo dubartoonni dhaabatanii akka fincaa'an gargaaru
5 Guraandhala 2020
Tigraayitti haleellaan xiyyaaraa lubbuu namootaa galaafate
Naannoo Tigraay keessatti lolli cimaa gaggeeffamuun gabaafame
Filannoon Itoophiyaa 'hanqinoota qabaatus karaa amanamummaa qabuun gaggeeffame' - Gamtaa Afrikaa